Kuvakwa kweNhandare yeNdege kwaMarange Kokonzera Kushushikana
Kukadzi 01, 2010
Mifananidzo yabudiswa nekambani yeku Britain, ye African Consolidated Resources, iyo yakadzingwa paminda yemangoda iyi muna 2006, inoratidza nhandare inonzi yakakurisa kuti inga ichivakirwa kutakura mangoda chete.
Vamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe vanonzi vari kushushikana nekuvakwa kuri kuitwa nhandare yendege kuminda yemangoda yekwaMarange mudunhu reManicaland.
Mifananidzo yabudiswa nekambani yekuBritain, yeAfrican Consolidated Resources, iyo yakadzingwa paminda yemangoda iyi muna 2006, inoratidza nhandare iyi yakakurisa kuti inga ichivakirwa kutakura mangoda chete.
Mumiriri weBritain muZimbabwe, VaMark Canning, vanoti vacharamba vachiongorora zviri kuitikwa kwaMarange, zvikuru zvakavikirwa nhandare iyi.
Asi vaimbova sachigaro veKimberly Process, Va Bernard Esau veku Namibia, vatiwo hapana chinoshamisa pakuti Zimbabwe kana makambani ari kuchera mangoda kwaMarange, avaka nhandare nekuti pamigodhi mizhinji pasi rose, pane nhandare dziripo. Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi reMbada Diamonds, kambani yakapihwa mvumo yekuchera mangoda kwaChiadzwa, kunyange hazvo dare repamusoro soro rakati mangoda ekwaChiadzwa ambomira kucherwa pamwe nekutengeswa kudzamara matare edzimhosva apedza kutonga nyaya dziri mumatare dzine chekuita negakava rekwaChiadzwa.
VaJonathan Samkange ndivo gweta re ACR. VaSamkange vanoti ichokwadi kuti pamigodhi panodiwa nhandare, asi nhandare iri kuvakwa kwaMarange yakurisa zvinova zvakonzera kushushikana kwevazhinji.
Hurukuro naVa Jonathan Samkange